Mayelana NATHI - Amber Mission
"Okuhamba phambili ekukhanyeni kwangaphandle
Letha Ambience Nokuvikeleka Ekuphileni Kwakho Kwangaphandle "
I-Amber Lighting inkampani yobuchwepheshe obuphezulu esungulwe ngo-2012. Selokhu kwasungulwa kwethu ukuthobeka, ukugxila kwethu bekuhlala kunikela ngezixazululo nemikhiqizo “efanelekile nethembekile” kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele.
Eminyakeni engu-8 edlule, besenza izibani zomhlaba, izibani zodonga, amalambu eposi, amalambu ezikhukhula, amalambu engadi, amalambu e-bollard, amalambu emigwaqo.
Njengoba izidingo ezintsha nobuchwepheshe buza empilweni yethu, manje sesinikeza nokukhanyisa okuhlakaniphile ngemisebenzi emisha, efana namalambu we-RGB ashintshekayo ombala, i-wifi noma amalambu alawulwa yi-Alexa, amalambu asebenza ngelanga.
Senza nemikhiqizo eyenziwe ngezifiso. Ngokusithumela izithombe nobukhulu, singenza idizayini, sivule isikhunta, futhi sikwenzele imikhiqizo.
Siyaqiniseka ukuthi ngokusebenzisana kwethu ndawonye, ​​nizoba nokuhlangenwe nakho okungavamile. Silindele imiyalezo futhi sibuza emhlabeni wonke.
♦ Abanikazi Bemikhiqizo
♦ Izinkampani Zokuhweba
♦ Osonkontileka beProjekthi
Siyakusebenzela, futhi siyakhula nawe.
U-Amber waqala ibhizinisi eliholwa njengefektri encane enethimba lobuchwepheshe elisebenzayo.
Ukunwetshwa kolayini woMhlangano
Ngemuva kwama-yeas amabili, sinemishini ye-SMT kanye nolayini abathathu bomhlangano. Sibe nochwepheshe abaningi ukujoyina amaqembu ethu, futhi saba nokuthengisa okuphindwe kabili uma kuqhathaniswa nonyaka odlule.
Ngesidingo esikhulu sezinto zokukhanyisa ezenziwe ngokwezifiso, esikhundleni sokuya kwamanye amalebhu ukuyohlola, sitshale amalabhu ethu.
Ukuthuthukiswa kwendawo yokukhanyisa okusha
Sisebenza nomhlinzeki omusha wesilawuli ukuthola izixazululo zokukhanyisa okuhlakaniphile, sakha amalambu e-RGB, amalambu alawulwa yi-wifi, amalambu elanga anezinzwa.